446s ကိုယ့်ကိုယ်ကို (သုံးနာရီအတွင်းဟမ်) သစ်လွိုက် - အက်ဒွဗ်အေဗလာအသစ်ကိုလာမင်သွားသည် images and subtitles
ခဏ ဒီနေ့ ~~~~ ဖိနပ်နှစ်ခု လီယိုဂျေးနှင့်အတူတကွ ~! ~ မည်သူမဆို ယောက်ျားတွေအားလုံး ~ ငါလီယိုဂျေ ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပါ ဒီတော့လေသံကစက်ရုပ်လိုပါပဲ အခုအိပ်စက်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီးအိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်သည်။ ငါတို့အခု ကျွန်တော်ဟာသုံးနာရီသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ပါ။ ၃ နာရီ ငါ့သွားတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ် ?? ㄴㄴ; မင်းရဲ့သွားတွေကတကယ်ကိုကောင်းတယ်။ ငါတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ မကောင်းဘူးလို့ပြောတာပဲ သူကကောက်ကောက်နှင့်အဝါရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် တဖန်သင်တို့အဘယ်သို့ပြောသနည်း။ ငါကဤကဲ့သို့သောကဆိုသည် ဟုတ်လား ငါကအလယ်၌မလုံလောကျကဆိုသည် အခုတော့ Corona ပါပဲ ဒါကြောင့်ကြိုးစားရန် အယူအဆကတော့သုံးနာရီအတွင်းမှာသင်အလွှာချနိုင်သည် နောက်ထပ် ၃ နာရီလောက်ထပ်တိုးရ ဦး မယ် ၃.၅ နာရီဆေးခန်း ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိမလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး ငါ pastel နှုတ်ခမ်းနီလျှောက်ထားခဲ့ပါဘူး သင်ဤအရာကိုအသုံးပြုပါကသင်၏သွားများသည်အဝါရောင်ဖြစ်လာလိမ့်မည် ဟားဟား Maybelline နှုတ်ခမ်းနီ * ဟားဟား ငှက်ပျောလို မျက်နှာချင်းဆိုင် သင်၏သွားကိုပြပါ မင်းအလယ်အလယ်ကအဖြူရောင်ပဲ အဆုံးမှာအဝါရောင် တိုကျခိုကျမှု ဆရာဝန်ပြောတာ ဒီမှာအရမ်းချွန်တယ် နှင့်မျဉ်းကြောင်း ဒါဟာသပ်သပ်ရပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုငါဖမ်းမယ် သွားအရောင်ပင် ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်သည်သွားအားလုံးကိုကြိတ်ရမည်ဟုထင်ခဲ့သည် ဒါပေမယ့်ဒီမှာငါ့အမှု၌ ၎င်းသည် Dashing Diva လက်သည်းထိပ်နှင့်တူသည်။ သွားများ၏အပြင်ဘက်အပေါ်နည်းနည်းပြီးနောက် ထိပ်မှာနည်းနည်း ပရိုတင်းစကိုဝတ်ဆင်မည့်အစား (Crown ကိုကျွန်တော်မမှတ်မိပါ) ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့အောက်ခြေသွားတွေဟာအကြီးမားဆုံးပြproblemနာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် ငါပြောတဲ့အခါငါမြင်နိုင်တယ် ဒါပေမယ့်ငါဒါကိုပြင်သင့်သလား။ အိုးကနှုတ်ခမ်းဖျော်ရည်ကိုယူဆောင်လာပုံမရဘူး သွားများကိုပြုပြင်ပေးသောအရာသည်အတွင်းပိုင်းအစိုဓာတ်နှင့်ဖုံးအုပ်ထားသဖြင့်ကောင်းစွာနေ၏။ (ဒါ) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမေ့ဆေးပြီးနောက် * မေ့ဆေးဂျယ်လ် * ငါ့အသွင်အပြင်: ငါ့ခံစားချက် ဒီမတိုင်မီ ဤရွေ့ကား, ပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ် ကောင်းပါတယ် ဒါဟာ matte နောက်ပြီးတူသောခံစားရ ;; ငါတစ်ခုခုပေါ်မှာတင်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် သငျသညျ prosthetics လုပ်နေပုံရသည် ပြီးသွားတဲ့အထိကူညီပေးပါ။ ငါအိမ်ပြန်သင့်သလော ဒါပေမယ့်မသွားခဲ့ပါဘူး သုံးနာရီအတွင်းသင်လုပ်သမျှအခမဲ့ဖြစ်သည် the ည့်ခန်းထဲပြန်ထိုင်ပါသို့မဟုတ်တစ်ခုခုဝယ်စားရန်အပြင်သို့ထွက်သွားပါ ဒါပေမယ့်ငါ ငါအိပ်ချင်တယ် ရီးရဲလ် Im တနည်းအားဖြင့်3နာရီမလွန်ရ ၇ နာရီ ငါပြန်လာပြီ။ ယခုတွင်ငါသည်ကြည်လင်ပြီးကြည်လင်သောကြည်လင်နေသည် စကားဝှက် ဘာကွာခြားလဲ။ တစ်ပတ်ပြီးပြီ မင်းအခုငါ့လိုခံစားနေရတာလား ငါကရန်အသုံးပြုတယ် တစ်စုံတစ်ခုသည်သင်၏သွားပေါ်တွင်ရှိသည်ဟုခံစားမည့်အစား ငါနှုတ်ခမ်းထုတ်ကုန်အချို့ကိုကြိုးစားသွားမှာပါ သငျသညျအောက်မှာအံသွားမြင်နိုင်ပါသည် ထိုအခါမူရင်းနှုတ်ခမ်းထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ ငါအရမ်းမရယ်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုမျိုးပဲ ငါအရောင်ပြင်းပြီးအဲဒီမှာထူးဆန်းတဲ့တစ်ခုခုထည့်မယ် ရုံအထူးသဖြင့်နိုင်ရန်အတွက် ချစ်ခင်ရပါသော Dalia Blooming Edition Lip Paradise Sheer Dew Tinted Lipstick Olivia အရောင် K-beauty သည်လူအများအပြားကိုလိုက်စားသည် အရောင်အမည်အားလုံးမိန်းကလေးအမည်များဖြစ်ကြသည် အရောင်ကဘာလဲဆိုတာတောင်မှပြောတာတောင်မှသူကအများအားဖြင့်ဘာဆိုတာလဲငါမသိဘူး အဲဒီမှာသင်သွားပါ Olivia Brenda or Shallot ဝိုး ... တောက်ပ ဒါက Hens လို့ခေါ်တယ် ၎င်းသည် K-beauty အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ဒီနေ့လူငယ်တွေကြိုက်တယ် 'Soft Demand' အရောင် ဒါမင်္ဂလာပါ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဝါဂွမ်းမှင် မှေးမှိန်သောအဝါရောင် tulips အရောင်များအားလုံးဆင်တူသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီတစ်ခါတော့ပျော်စရာတစ်ခုခုကိုသွားကြစို့။ ဒီ Sailor Moon ကိုလုပ်ကြရအောင်။ Sailor Moon X အရောင်ပေါ့ပ်စုဆောင်းခြင်း Usagi အရောင် အတွင်းပိုင်းကင်ဆာမ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို (သုံးနာရီအတွင်းဟမ်) သစ်လွိုက် - အက်ဒွဗ်အေဗလာအသစ်ကိုလာမင်သွားသည်
< start="0" dur="0.98"> ခဏ >
< start="0.98" dur="3.72"> ဒီနေ့ ~~~~ ဖိနပ်နှစ်ခု >
< start="5.12" dur="1.7"> လီယိုဂျေးနှင့်အတူတကွ ~! ~ >
< start="6.82" dur="1.4"> မည်သူမဆို >
< start="9.2" dur="1.96"> ယောက်ျားတွေအားလုံး ~ ငါလီယိုဂျေ >
< start="12.86" dur="1.94"> ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပါ >
< start="14.8" dur="2.24"> ဒီတော့လေသံကစက်ရုပ်လိုပါပဲ >
< start="17.04" dur="4.5"> အခုအိပ်စက်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီးအိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်သည်။ >
< start="21.54" dur="1.18"> ငါတို့အခု >
< start="23.14" dur="1.62"> ကျွန်တော်ဟာသုံးနာရီသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ပါ။ >
< start="27.2" dur="0.76"> ၃ နာရီ >
< start="28.36" dur="1.7"> ငါ့သွားတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ် ?? >
< start="38.56" dur="1.68"> မင်းရဲ့သွားတွေကတကယ်ကိုကောင်းတယ်။ >
< start="40.24" dur="2.18"> ငါတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ မကောင်းဘူးလို့ပြောတာပဲ >
< start="42.42" dur="3.34"> သူကကောက်ကောက်နှင့်အဝါရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် >
< start="50.16" dur="2.1"> တဖန်သင်တို့အဘယ်သို့ပြောသနည်း။ >
< start="53.32" dur="1.2"> ငါကဤကဲ့သို့သောကဆိုသည် >
< start="54.52" dur="0.5"> ဟုတ်လား >
< start="55.02" dur="1.46"> ငါကအလယ်၌မလုံလောကျကဆိုသည် >
< start="57.9" dur="0.9"> အခုတော့ Corona ပါပဲ >
< start="58.8" dur="1.16"> ဒါကြောင့်ကြိုးစားရန် >
< start="59.96" dur="4.72"> အယူအဆကတော့သုံးနာရီအတွင်းမှာသင်အလွှာချနိုင်သည် >
< start="64.68" dur="1.96"> နောက်ထပ် ၃ နာရီလောက်ထပ်တိုးရ ဦး မယ် >
< start="69.54" dur="1.86"> ၃.၅ နာရီဆေးခန်း >
< start="75.98" dur="3.42"> ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိမလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး >
< start="80.96" dur="1.98"> ငါ pastel နှုတ်ခမ်းနီလျှောက်ထားခဲ့ပါဘူး >
< start="85.38" dur="2.46"> သင်ဤအရာကိုအသုံးပြုပါကသင်၏သွားများသည်အဝါရောင်ဖြစ်လာလိမ့်မည် >
< start="101.76" dur="1.12"> ဟားဟား >
< start="102.88" dur="2.18"> Maybelline နှုတ်ခမ်းနီ * >
< start="107.12" dur="2.34"> ဟားဟား ငှက်ပျောလို >
< start="109.46" dur="0.96"> မျက်နှာချင်းဆိုင် >
< start="114.96" dur="0.58"> သင်၏သွားကိုပြပါ >
< start="117.46" dur="3.28"> မင်းအလယ်အလယ်ကအဖြူရောင်ပဲ >
< start="120.74" dur="1.56"> အဆုံးမှာအဝါရောင် >
< start="139.96" dur="1.32"> တိုကျခိုကျမှု >
< start="147.86" dur="1.3"> ဆရာဝန်ပြောတာ >
< start="151.24" dur="1.4"> ဒီမှာအရမ်းချွန်တယ် >
< start="152.64" dur="1.94"> နှင့်မျဉ်းကြောင်း >
< start="156.06" dur="2.6"> ဒါဟာသပ်သပ်ရပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="158.66" dur="1.62"> ဒါဆိုငါဖမ်းမယ် >
< start="160.28" dur="2.58"> သွားအရောင်ပင် >
< start="162.86" dur="6.38"> ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်သည်သွားအားလုံးကိုကြိတ်ရမည်ဟုထင်ခဲ့သည် >
< start="169.24" dur="2.16"> ဒါပေမယ့်ဒီမှာငါ့အမှု၌ >
< start="171.4" dur="4.32"> ၎င်းသည် Dashing Diva လက်သည်းထိပ်နှင့်တူသည်။ >
< start="175.72" dur="2.12"> သွားများ၏အပြင်ဘက်အပေါ်နည်းနည်းပြီးနောက် >
< start="177.84" dur="1.82"> ထိပ်မှာနည်းနည်း >
< start="179.66" dur="1.7"> ပရိုတင်းစကိုဝတ်ဆင်မည့်အစား (Crown ကိုကျွန်တော်မမှတ်မိပါ) >
< start="181.36" dur="3.5"> ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့အောက်ခြေသွားတွေဟာအကြီးမားဆုံးပြproblemနာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် >
< start="184.86" dur="2.06"> ငါပြောတဲ့အခါငါမြင်နိုင်တယ် >
< start="186.92" dur="2.88"> ဒါပေမယ့်ငါဒါကိုပြင်သင့်သလား။ >
< start="189.8" dur="1.72"> အိုးကနှုတ်ခမ်းဖျော်ရည်ကိုယူဆောင်လာပုံမရဘူး >
< start="194.98" dur="2.6"> သွားများကိုပြုပြင်ပေးသောအရာသည်အတွင်းပိုင်းအစိုဓာတ်နှင့်ဖုံးအုပ်ထားသဖြင့်ကောင်းစွာနေ၏။ >
< start="197.58" dur="0.84"> (ဒါ) >
< start="204.7" dur="2.84"> တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမေ့ဆေးပြီးနောက် * မေ့ဆေးဂျယ်လ် * >
< start="207.54" dur="1.6"> ငါ့အသွင်အပြင်: >
< start="209.14" dur="1.64"> ငါ့ခံစားချက် >
< start="210.78" dur="1.64"> ဒီမတိုင်မီ >
< start="212.86" dur="1.12"> ဤရွေ့ကား, ပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ် >
< start="214.76" dur="0.88"> ကောင်းပါတယ် >
< start="215.64" dur="1.74"> ဒါဟာ matte နောက်ပြီးတူသောခံစားရ ;; >
< start="217.38" dur="2.06"> ငါတစ်ခုခုပေါ်မှာတင်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် >
< start="220.02" dur="1.94"> သငျသညျ prosthetics လုပ်နေပုံရသည် >
< start="222.52" dur="2.72"> ပြီးသွားတဲ့အထိကူညီပေးပါ။ >
< start="225.24" dur="0.94"> ငါအိမ်ပြန်သင့်သလော >
< start="226.18" dur="2.06"> ဒါပေမယ့်မသွားခဲ့ပါဘူး >
< start="228.24" dur="2.88"> သုံးနာရီအတွင်းသင်လုပ်သမျှအခမဲ့ဖြစ်သည် >
< start="231.12" dur="3.68"> the ည့်ခန်းထဲပြန်ထိုင်ပါသို့မဟုတ်တစ်ခုခုဝယ်စားရန်အပြင်သို့ထွက်သွားပါ >
< start="234.8" dur="2.64"> ဒါပေမယ့်ငါ >
< start="237.44" dur="2.06"> ငါအိပ်ချင်တယ် >
< start="239.5" dur="0.94"> ရီးရဲလ် Im >
< start="250.58" dur="2.32"> တနည်းအားဖြင့်3နာရီမလွန်ရ >
< start="252.9" dur="1.98"> ၇ နာရီ >
< start="254.88" dur="3.12"> ငါပြန်လာပြီ။ >
< start="275.68" dur="2.3"> ယခုတွင်ငါသည်ကြည်လင်ပြီးကြည်လင်သောကြည်လင်နေသည် >
< start="299.76" dur="0.62"> စကားဝှက် >
< start="310.02" dur="1.84"> ဘာကွာခြားလဲ။ >
< start="312.66" dur="1.12"> တစ်ပတ်ပြီးပြီ >
< start="313.78" dur="2.14"> မင်းအခုငါ့လိုခံစားနေရတာလား ငါကရန်အသုံးပြုတယ် >
< start="315.92" dur="2.52"> တစ်စုံတစ်ခုသည်သင်၏သွားပေါ်တွင်ရှိသည်ဟုခံစားမည့်အစား >
< start="318.44" dur="2.06"> ငါနှုတ်ခမ်းထုတ်ကုန်အချို့ကိုကြိုးစားသွားမှာပါ >
< start="320.5" dur="2.4"> သငျသညျအောက်မှာအံသွားမြင်နိုင်ပါသည် >
< start="322.9" dur="2.64"> ထိုအခါမူရင်းနှုတ်ခမ်းထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ >
< start="325.54" dur="2.44"> ငါအရမ်းမရယ်ခဲ့ဘူး။ >
< start="327.98" dur="1.04"> ဒီလိုမျိုးပဲ >
< start="331.58" dur="3.18"> ငါအရောင်ပြင်းပြီးအဲဒီမှာထူးဆန်းတဲ့တစ်ခုခုထည့်မယ် >
< start="334.76" dur="1.16"> ရုံအထူးသဖြင့်နိုင်ရန်အတွက် >
< start="335.92" dur="4.08"> ချစ်ခင်ရပါသော Dalia Blooming Edition Lip Paradise Sheer Dew Tinted Lipstick >
< start="340.6" dur="0.8"> Olivia အရောင် >
< start="341.4" dur="2.66"> K-beauty သည်လူအများအပြားကိုလိုက်စားသည် >
< start="344.06" dur="3.66"> အရောင်အမည်အားလုံးမိန်းကလေးအမည်များဖြစ်ကြသည် >
< start="347.72" dur="2.64"> အရောင်ကဘာလဲဆိုတာတောင်မှပြောတာတောင်မှသူကအများအားဖြင့်ဘာဆိုတာလဲငါမသိဘူး >
< start="350.36" dur="0.68"> အဲဒီမှာသင်သွားပါ >
< start="351.66" dur="0.96"> Brenda or >
< start="357.8" dur="1.6"> ဝိုး ... >
< start="361.08" dur="0.76"> တောက်ပ >
< start="372.2" dur="1.66"> ဒါက Hens လို့ခေါ်တယ် >
< start="373.86" dur="2.18"> ၎င်းသည် K-beauty အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် >
< start="376.04" dur="2.9"> ဒီနေ့လူငယ်တွေကြိုက်တယ် >
< start="378.94" dur="2.76"> 'Soft Demand' အရောင် >
< start="395.2" dur="1.52"> ဒါမင်္ဂလာပါ >
< start="396.72" dur="2.56"> ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဝါဂွမ်းမှင် >
< start="399.28" dur="2.34"> မှေးမှိန်သောအဝါရောင် tulips >
< start="406.14" dur="1.92"> အရောင်များအားလုံးဆင်တူသည်။ >
< start="420.9" dur="0.76"> နောက်ဆုံးတော့ >
< start="421.66" dur="1.32"> ဒီတစ်ခါတော့ပျော်စရာတစ်ခုခုကိုသွားကြစို့။ >
< start="422.98" dur="1.22"> ဒီ Sailor Moon ကိုလုပ်ကြရအောင်။ >
< start="424.2" dur="2.54"> Sailor Moon X အရောင်ပေါ့ပ်စုဆောင်းခြင်း >
< start="427.44" dur="0.88"> Usagi အရောင် >
< start="444.02" dur="1.92"> အတွင်းပိုင်းကင်ဆာမ >